Nhau - Kongiri yekupolisha bvunzo mhenyu show
Nhasi tine kongiri yekukorobha bvunzo mhenyu show, isu tinonyanya kuenzanisa kupenya kwe3 - gumi nemaviri chikamu chekupurinda pad uye 3-torx polishing pad.
Ichi chikamu chegumi nemaviri kusvika gumi nemaviri polishing pad, ukobvu hwacho ndi12mm, inokodzera kongiri yakaoma uye yepurazzo pasi. Grits 50 # ~ 3000 # dziripo. Ichave ine hukasha, yakasimba, inopenya kupfuura mazhinji eiyonebwe makorari Mapedhi mumusika.
Iyi ndiyo imwe pad yatinoidaidza kuti 3 inch torx polishing pad, iyo yakavhurwa gore rapfuura. Iyo inoshandiswa zvakare yakaoma kukorobha kongiri uye terazzo pasi, asi iyo ukobvu ingori 10mm. Yakagadzirwa nefomula yazvino. mutengo wacho wakanaka kwazvo. Iyo yakakwira mutengo-inoshanda pane ino.
Yayo makumi mashanu # -100 # -200 # ine hukasha uye yakasimba kupfuura yechinyakare Mapedhi resini, iwe unogona kuitora se mapads akaomeswa, iyo inogona kukurumidza kubvisa kukwenya kwakasiiwa nesimbi madhaimani 120 #, kunyangwe 80 #.
400 # -800 # -1500 # -3000 # ari kubwinya makorari Mapedhi, iyo inogona kuita kushamisika kupenya kwepamusoro uye kujekesa kwepamusoro pauriri hwako.
Ichi chikamu chekuyedza, iri chigayo cheguyo. Yakagayiwa nemidziyo yesimbi grit 30-60-120 #, resin mapedhi 50 # -100 #. Kuti tibudirire bvunzo mhedzisiro, isu takatopfapfaidza hardener pamusoro pechiso kusimbisa pasi kuomarara. Zvino ivhu rakakamurwa kuita zvikamu zviviri. Kuruboshwe Chikamu A uye kurudyi Chikamu B. Tichaedza 3 masendimita gumi nemaviri zvikamu zvekukwiza pad pane chikamu A, 3 inch torx polishing mapedhi achaedzwa pachikamu B.
Mushure mekupora ne 200 # -400 # -800 #, unogona kunyatsoona kubva pamusoro pekuti chikamu B chine sheen yakakwira zvakanyanya, uye iwe unogona kuona yakanaka mwenje kuratidza. Kune chinhambwe chemakumi matatu kusvika makumi mashanu tsoka, iyo pasi inoratidza zvakajeka padivi uye pamusoro mwenje.